आफ्नै बुबाले १६ महिनाकी छोरीको विवाह गरिदिए,का’रण यस्तो !!हेर्नुहोस केहि तस्विरहरु – Dailny NpNews
आफ्नै बुबाले १६ महिनाकी छोरीको विवाह गरिदिए,का’रण यस्तो !!हेर्नुहोस केहि तस्विरहरु
प्रकाशित मिति: आइतबार, फाल्गुण २३, २०७७ समय: १०:१४:३१
विश्वमा बिभिन्न अनौठा घटनाहरु घटिरहेका हुन्छन् । कुनै यस्ता घटना हुन्छन् जुन पत्याउन मुस्कील पर्छ तर सत्य हुन्छन् । यस्तै लण्डनमा एक अनौठो घ’टना घ’टेको छ । लण्डनमा आफ्नै बुबाले १६ महिनाकी छोरीको विवाह गरिदिएका छन् । सुन्दा पनि अनौठो लाग्ने एन्डी बनार्ड नाम गरेका पिताले १६ महिनाकी छोरीको विवाह गरे लगत्तै तस्विरहरु सामाजिक संजालमा निकै भाइरल भएका छन् । सायद जो कोहिलाई पनि सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ ।
आफुलाई ब्रेन क्या’न्सर र मिर्गोलामा क्या’न्सर भएका का’रण ति पिताले आफ्नी जम्मा १६ महिनाकी छोरीको विवाह गर्ने निर्णय गरेको स्थानीय संचार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । बाबु एन्डीलाई गम्भिर प्रकृतिको क्या’न्सर देखिएपछि आँफु मृ/त्युको मुखमा पुगेको भन्दै छोरीको विवाह आफ्नै हातले गरिदिने इच्छा पुरा गर्नका लागी यस्तो कदम चालेको उनले बताए । एन्डीले भने मेरो कुनै समय पनि मृ/त्यु हुन सक्छ त्यसै कारण म १६ महिनाकी छोरीको विवाह गर्ने निश्कर्षमा पुगे ।